Fandikana vaovao sivana an'ny famolavolana OnePlus 6 | Androidsis
Ny endrika OnePlus 6 dia naseho tamin'ny famoahana vaovao
Eder Ferreño | | About us, OnePlus
Ny OnePlus 6 dia iray amin'ireo mpihetsiketsika lehibe tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ny avo lenta an'ny marika sinoa, izay tokony hahatratra ny tsena atsy ho atsy, dia iharan'ny tondra-drano maro be. Ankehitriny, tafaporitsaka ny mety famolavolana ny fitaovana. Izao dia manana isika isan-karazany renders izay ahitanao izay antenaina ho endriny farany.
Misaotra ireo mpandika teny ireo fa afaka mahazo hevitra momba izay azontsika antenaina amin'ity OnePlus 6. Fivoahana ity aorian'izay Navoaka izany fa afaka natolotra tamin'ny 5 Mey tany Chine ny telefaona. Noho izany dia mianatra antsipiriany bebe kokoa momba ilay fitaovana izahay.
Ireo fandikana ireo dia mampiseho amintsika famolavolana mitovy amin'ireo fivoahana farany. Zavatra iray mahatonga antsika hino fa mety ho izy io no famolavolana farany an'ny avo lenta. Na dia famoahana aza izany. Noho izany, tsy mila matoky 100% ianao fa tena sary amin'ny famolavolana farany ny fitaovana.
Afaka mahita an'izany isika amin'ny sary ny loka dia manana toerana ambony eo amin'ny efijery OnePlus 6. Raha toa ka somary matevina kokoa ny endriny ambany noho ny an'ny OnePlus 5T. Ho fanampin'izay, ao ambadika no ahitantsika a efitrano roa, voalamina mitsangana. Ka tsy dia misy tsy ampoizina loatra amin'izany.
Eo ambanin'ny fakantsary aoriana no ahitantsika ny sensor sensor. Ary koa ny flash LED indroa. Toa ny OnePlus 6 dia nanamarika ny famolavolana ny Galaxy S9 + amin'io lafiny io.. Ho fanampin'izay, afaka nahita izahay fa antenaina ho tonga amin'ny loko isan-karazany eny an-tsena ny telefaona. Satria hitantsika amin'ny manga sy fotsy ary mainty izany.
Ny fahatongavan'i OnePlus 6 dia manakaiky kokoa. Haino aman-jery maro no milaza fa ny Ny 5 Mey no fanolorana ny telefaona. Ka mety ho efa afaka efa-bolana dia efa ho eo amintsika ny fitaovana avo lenta. Azo antoka fa mandritra ny andro vitsivitsy dia hianarantsika bebe kokoa momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ny endrika OnePlus 6 dia naseho tamin'ny famoahana vaovao
Xiaomi dia handefa telefaona roa miaraka amin'ny Snapdragon 670 eny an-tsena
Spotify dia afaka mandefa mpilalao fiara mitokana